Bishan Ogosto 28 waxay imaan doontaa Flyme 8 oo ay weheliso Meizu 16S Pro | Androidsis
Bishan Ogosto 28, Flyme 8 ayaa isla iman doonta Meizu 16S Pro
Meizu wuxuu ka mid ahaa shirkadaha soo saara taleefannada casriga ah ee lagu gartaa inay bixiyaan mid ka mid ah lakabyada ugu fudud ee qaabeynta ee hadda jira, Flyme oo ah tan aan tixraaceyna waxay dadka ka dhigtay inay dareemaan raaxo aad u weyn, xitaa marka aysan helin oo ay weheliso fududaanta waxyaabaha. Laakiin labadii sano ee la soo dhaafay, tallaabooyinka Flyme ayaa si muuqata u gaabiyay.
Horaantii sanadkan, aasaasaha Meizu Technology Huang Zhang ayaa shaaca ka qaaday taas Duulaya 8 hore ayuu u socday. Tan iyo markaas, dhowr tilmaam ayaa laga sameeyay oo ku saabsan iyo intii ay ahayd taariikhda ay soo saarayso Markii hore, lama shaacinin goorta uu ka soo muuqan doono moobiilka, illaa iyo hadda.
28-ka Arbacada soo socota, Meizu si loo bilaabo Meizu 16S Pro, iyo Flyme 8 ayaa ugu dambeyn imaan doona isla waqtigaas. Iyada oo qayb ka ah baahinta, shirkaddu waxay soo saartay agab dhiirrigelin ah oo si muuqata loogu arkay in lakabkani uu la iman doono qalabka.
Intaa waxaa dheer, Madaxweyne Ku-Xigeenka Sare ee Meizu Teknolojiyada dhowaan isna wuxuu si maldahan wax uga sheegay ereyga "dhakhso!", Via Weibo, oo wuxuu kaloo sii weydiiyay qof walba haddii Flyme 8 ay leedahay shir gaar ah iyo nooca moduleka ah ee aadka u daneynaya waxyaabaha ku jira. Shirkadda ayaa hubaal ka dhigi doonta Flyme 8 ogeysiis ku saabsan xawaareheeda iyo xalalka ay siin doonto dadka isticmaala.Waxay umuuqataa inay danaynayso inay qanciso baahiyaha kuwan oo dhan.
Dhinaca kale, Flyme 8 ayaa la sheegay inay aad u qurux badan tahay iyo in ay la imaan doonto astaamo cusub sida animation vortex aaladda, daaqada yar ee 2.0, Home Guard 3.0 iyo qaabka ciyaarta 4.0. Waxaan horeyba u ognahay waxa ku saabsan astaamahan qaarkood waxay ku saabsan yihiin, laakiin kuwa kale ayaa weli ah in la muujiyo, iyo sidoo kale inaan ogaanno gabi ahaanba faahfaahinta cape-ka iyo inaan gacanta ku hayno jadwalka bilawga ee isku mid ah moodooyinka kala duwan ee soo-saaraha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Bishan Ogosto 28, Flyme 8 ayaa isla iman doonta Meizu 16S Pro
Instagram waxay dhexgeli doontaa xayeysiis dheeri ah sheekooyinkeeda
Redmi K30 horeyba wuu u socday wuxuuna la imaan lahaa 5G